Amarobhothi Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Amarobhothi Factory
Uchungechunge olune-Axis Robot Uchungechunge lwe-axis amane lwe-axis JZJ100B-230 100KG Uchungechunge lwamarobhothi amane we-axis JZJ25B-180 25KG Uchungechunge lwamarobhothi amane we-axis JZJ15B-140 15KG Ukwethulwa kafushane kwerobhothi eliphatheka ngokuzenzekelayo: 1. Irobhothi elilayishayo nelithulayo linebanga elikhulu lokulayisha kusuka kumakhilogremu amaningana kumakhilogremu angamakhulu amaningana; 2. Ijubane eligijimayo liyashesha futhi liyaguquguquka; 3. Isenzo esiguquguqukayo, singaqedela imisebenzi eyinkimbinkimbi yokuphatha nokulayisha nokulayisha; 4.Ukuthembeka okuphezulu kanye ...
Uchungechunge lwe-Axis Robot Six Six axis robot series JZJ50A-270 （100A270, 50KG Six axis robot series JZJ06A-090 6KG Six axis robot series JZJ10A-160 10KG Six axis robot series JZJ20A-180 20KG Ukwethulwa kafushane kwerobhothi yokuphatha okuzenzakalelayo: 1. Ukulayisha futhi ukothula irobhothi kunebanga elikhulu lomthwalo kusuka kumakhilogremu amaningana kuya kumakhulu amakhilogremu ambalwa; 2. Ijubane eligijimayo liyashesha futhi liyaguquguquka; 3. Isenzo esiguquguqukayo, singaqedela ukuphatha okuyinkimbinkimbi ne-loa ...
Ukushisela irobhothi Ukushisela irobhothi uchungechunge JZJ06C-180 Ukushisela irobhothi uchungechunge JZJ06C-144 zokushisela irobhothi uchungechunge JZJ06C-160 Ukushisela irobhothi uchungechunge JZJ06C-200 Isingeniso esifushane Ukushisela irobhothi irobhothi lezimboni elibandakanyeka ekushiseni (kufaka phakathi ukusika nokufafaza). Ngokwencazelo yenhlangano yomhlaba wonke ye-Standardization (ISO) ukuthi irobhothi lezimboni lingele-robot ejwayelekile yokushisela irobhothi, irobhothi lezimboni uhlelo olunezinhloso eziningi, olunokuphindwa ...